ကုန်ကြမ်း Trastuzumab (180288-69-1) HPLC≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / အခြားသူများက / Trastuzumab (180288-69-1)
SKU: 180288-69-1. အမျိုးအစား: အခြားသူများက
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Trastuzumab (CAS 180288-69-1) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Trastuzumab အမှုန့် HER2-အပြုသဘောရင်သားကင်ဆာ၏ကုသမှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ HER2 ပရိုတိန်း overexpression 25% အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာဖြစ်ပါတယ်မူလတန်းရင်သားကင်ဆာ cancers.Trastuzumab ၏ -30% HER2 overexpress လူ့ tumorcells ၏ပြန့်ပွားတားစီးရန်, နှစ်ဦးစလုံးအတွက်စသည်တို့ assay နှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပြသလျက်ရှိသည်။
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 61-71 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင်မှုကို Temp: 2-8 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
စတီရွိုက်သံသရာအတွက် Trastuzumab (180288-69-1) အသုံးပြုမှု
Trastuzumab (CAS 180288-69-1), ကုန်သွယ်ရေးနာမကိုအမှီ Herceptin ဖြစ်ပါတယ်။
Trastuzumab သွေးကြော (သွေးကြောသွင်း, IV) သို့တစ်ခုပြုတ်ရည်ကတဆင့်ပေးသောဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးထိုး 90 မိနစ်အပ်သည်။ အကယ်. ကောင်းမွန်စွာသည်းခံနောက်ဆက်တွဲပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆေးများ 30 မိနစ်ကျော်ပေးထားနိုင်ပါသည်။
သင်ရရှိလိမ့်မည်ဟု Trastuzumab (180288-69-1) ၏ငွေပမာဏကိုသင့်ရဲ့အမြင့်နှင့်အလေးချိန်, သင့်ယေဘုယျကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့်ကုသခံနေရကင်ဆာသို့မဟုတ်ခွအေနအေအမျိုးအစားအပါအဝင်အများအပြားအချက်များပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ သင့်ဆရာဝန်ကသင်၏ထိုးခြင်းနှင့်အချိန်ဇယားကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
Trastuzumab ၏တစ်ဦးကလေးနက်ပေမယ့်အဆန်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးစိတျနှလုံး၏မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းအရေးယူမှုနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်စေနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးပြဿနာများ (နှလုံးပျက်ကွက်) ၏ဖြစ်ပွားမှုနှလုံးရောဂါသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောရင်ဘတ်မှဓါတ်ရောင်ခြည်, တိုးတက်အသက်အရွယ်နှင့် (ထိုကဲ့သို့သော doxorubicin နှင့် cyclophosphamide ကဲ့သို့) ကိုအခြားနှလုံး-အဆိပ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကဲ့သို့သောအခြားအန္တရာယ်အချက်များနှင့်အတူလူတိုးပွါး။ သင်သည်မည်သည့် Trastuzumab ယူနိုင်ပြီးသင့်ရဲ့ကုသမှုစဉ်အတွင်းအနီးကပ်သင်၏နှလုံးစောင့်ကြည့်ဦးမည်ရှေ့၌သင်တို့ဆရာဝန်သင်၏နှလုံး function ကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ နှလုံးပျက်ကွက်လက္ခဏာတွေပေါ်လာလျှင် Trastuzumab (180288-69-1) ရပ်စဲနိုင်ပါသည်။
Monoclonal ပဋိ "ကိုပစ်မှတ်ထား" ကင်ဆာကုထုံးတစ်ခုအတော်လေးသစ်ကိုအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ပဋိကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဝင် (ထိုကဲ့သို့သောပိုးအတွက်ပရိုတိန်းကဲ့သို့) တစ်ဦးကိုပဲတုံ့ပြန်ပဋိဖန်တီးပေးပါတယ်။ အဆိုပါပဋိပစ္စည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ဖြင့်ပျက်စီးခြင်းအဘို့ပြုလုပ်အထိမ်းအမှတ်နိုင်ရန်အတွက်ကိုပဲသွား attach ။ ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်သိပ္ပံပညာရှင်ကိုပဲကိုက်ညီရန်ပရိုတိန်းဆုံးဖြတ်ရန်ကင်ဆာဆဲလ်တွေ (ပစ်မှတ်) ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာသတ်သတ်မှတ်မှတ် antigen ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ထို့နောက်တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့ပရိုတိန်းကို အသုံးပြု. သိပ္ပံပညာရှင်များကပစ်မှတ်ကိုပဲမှပူးတွဲပါလိမ့်မယ်တဲ့အထူး antibody ကိုဖန်တီးရန်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ပဋိသော့သော့ခတ်ကိုက်ညီတူသောကိုက်ညီ antigen မှပူးတွဲပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းပညာကျန်းမာတဲ့ဆဲလ်တွေလျော့နည်းအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့, တိကျသောဆဲလ်များကိုပစ်မှတ်ထားမှကုသမှုကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ Monoclonal antibody ကိုကုထုံးသာရသော antigen (နှင့်သက်ဆိုင်ရာပဋိ) ကင်ဆာအဘို့ပြုနိုင်ပါတယ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
Trastuzumab ကင်ဆာဆဲလ်တွေပေါ် HER2 / neu အဲဒီ receptor ပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အဆိုပါ HER2 ဗီဇကိုဝေများပြားဖို့ဆဲလ်ပြောပြခြင်းဖြင့်ပုံမှန်ဆဲလ်ကြီးထွားမှုကိုအချက်ပြလိုက်ခြင်းသောဆဲလ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပရိုတိန်းအဲဒီ receptor ထုတ်လုပ်သည်။ အချို့ကကင်ဆာရင်သားကင်ဆာတစ်ရှူးကိုဝေနှင့်အလွန်လျှင်မြန်စွာပွားဆဲလ်ထွက်လာပါတယ်လွန်း HER2 (HER2 / neu overexpression) ရှိပါတယ်။ Trastuzumab (180288-69-1), မပွားများထပ်မံကင်ဆာကြီးထွားမှုကိုကာကွယ်တားဆီးရန်နှင့်ကင်ဆာတိုးတက်မှုနှေးကွေးခြင်းမှဆဲလ်များကိုတားဆီးဖို့ HER2 receptors ပူးတွဲ။ ဒါဟာအစတစ်ခုကိုယ်ခံစွမ်းအားယန္တရားကိုနှိုးဆွခြင်းဖြင့်အလုပ်မဖြစ်ပေမည်။
AASraw ထံမှ Trastuzumab ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို
Dyclonine HCL အမှုန့်